Tete Grace - Chombo CheMurume Wangu Hachigone Kundisvitsa! Tete Grace - Chombo CheMurume Wangu Hachigone Kundisvitsa!
Tete Grace - Chombo CheMurume Wangu Hachigone Kundisvitsa!
Tete Grace, ndine 19 months ndaroorwa asi ndine dambudziko rekuti murume ndomuda chose uye iye anondida asi pabonde handisviki chaipo ipo nechombo chake, but ndiri ndega ndinosvika pakusvika.
Murume ane zvese zvakakwana uye anoshanda basa. Ini ndini ndine dambudziko.
Mhinduro Yangu: Murume kana wati anokuda, iwe uchimuda, zvoreva kuti munofanira kushanda pamwe chete kugadzirisa nyaya dzenyu. Kuti murume anzi anogona basa anofanira kumboita nguva muchisvirana kuti unyatsonyorova. Zvadaro okuitira nguva refu kubva pakupinza kusvika paanokudiridzira, toti maminitsi anopfuura manomwe. Vakadzi vakawanda panguva yakadai vanenge vasvikawo ipapo pauri kuti chaipo ipo.
Asi nzwisisai kuti kune vakadzi vakawanda vasingasvike pakusvika nekuda kwekuiswa nechombo. Ava vakawanda zvokusvika pa 65%. Vanoda kuti uku murume ari pabasa uku iwe muridzi uri kuzvikwizirirawo bhinzi nemaoko.
Tete: Chombo CheMurume Wangu Hachigone Kusvitsa!
Zvinonzi 25% yevakadzi vanosvitswa pakusvika nechombo hombe chete, saka ngatisakasira kufungira kuti varume ndivo vane dambudziko. Pamwe ndisu. Kana uchida kuwona kuti unoita nyore here kusvitswa pakusvikanechombo chete pasina kukwizirira kabhinzi, unokwanisa kukumbira murume wako akupime kutarangana kwakaita kubva paburi renhengo (kumusoro kwakananga kuguvhu) kusvika panotangira bhinzi nechokuzasi.
Kana kutarangana uku kukaratidza kuti kwakapfuura 2.5 cm, zvinoreva kuti uri munhu anonetsa kusvitsa pakusvika usina kukwizirirwa kabhinzi, panoda kukwizirira bhinzi.
Pamwe ndosaka uchiti uri wega hauna dambudziko. Saka apa tiri kuti tese tinoziva kuti kuiswa kunonaka hako chose asi dzimwe nguva unenge uchinzwa kuda kunyatsosvikawo chaipo panonyerekedza muviri. Chombo chega kune vamwe haizvikwanisi saka iwe muridzi isa maoko pakati uzvikwizirire bhinzi murume achikusvira zvinokasira kufamba kuti mese munakirwa.